शनिवार, बैशाख ४, २०७८ ०८:५४:२९ युनिकोड
मंगलबार, मंसिर ३०, २०७७ अरुणेश्वर खनाल
नेपालबाट बर्षेनी हजारौको संख्यामा दक्ष तथा अदक्ष जनशक्तिहरु रोजगारीका सिलसिलामा देशबाहिर जाने क्रम जारी छ । ति मध्ये अधिकांश १८ बर्ष देखि ४० बर्ष सम्मका युवाहरुनै हुने गर्दछन् । देशलाई आबश्यक पर्ने सक्रिय र आबश्यक जनशक्ती देशबाहिर पलायन हुदा यसले राज्यलाई पर्ने घाटाको हामी आकलन समेत गर्न सक्दैनौं । भलै बिदेशियका नेपालीहरुले पठाएको रेमिटान्स देशको अर्थतन्त्र एउटा बलियो अधार हो तर यसलाई अर्थतन्त्रको बलियो आधार मानेर आत्मरतिमा रमाईरहने हो भने देश एक दिन युवा विहिन अबस्थामा पुग्ने निश्चित छ । अहिले पनि देशका दुरदराज देखि विकसित शहहरुमा समेत तुलनात्मक रुपमा युवाहरुको संख्या निकै कम छ । उनिहरु कि त अध्ययनको सिलसिलामा बाहिरिएका छन् कि रोजगारीको सिलसलामा बाहिरिएका छन् । ति मध्ये अधिकांश रोजगारीकै सन्र्दभमा बाहिरिएको तथ्याकं हरुले पुष्टी गरेका छन् । यसको मुल कारण देशमा प्रसस्त रोजगारीको सिर्जना हुन नसक्नु , उद्यमशिलताको विकास हुन नसक्नु र स्वरोजगार मुलक व्यवसाय गर्नका लागि चुनौती हुनुनै प्रमुख कारण हो । यि बिषयहरुमा चर्चा गर्नु पुर्व संक्षेपमा तलका बिषयबस्तुहरुमा चर्चा गरौ :
नेपालमा आफैं नै नेपालमा नै रहेर केही काम गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता बोकेका युवाहरु पनि नभएका होइनन् । तर यस्तो सोचले सच्चा सकारात्मक उद्धेश्य राखेर स्थापना भएका व्यक्तिहरुको निम्ति भने राज्यले कहीँकतैबाट सहयोग गर्न सकेको छैन । नेपाल सरकार मातहतका अधिकांश कार्यक्रमहरु पहुँचवालाहरुको नियन्त्रणमा छन् । नेपालमा विभिन्न देशबाट लगानी भित्राउने गैह्र सरकारी संस्थाहरुले गरेको लगानीको प्रतिफल पनि तुलनात्मक रुपमा निकै नै कम छ । ग्रामीण क्षेत्रका जनताहरुलाई नै देखाएर ल्याइने रकम कत्तिको सदुपयोग हुन सकेको छ ? ग्रामीण क्षेत्रमा उक्त रकम के काममा प्रयोग हुन सक्यो र त्यसबाट कुन वर्ग कसरी लाभान्वित हुन सक्यो ? भन्ने सम्बन्धमा पनि अब हामीले खोजीनिती गर्ने बेला आएको छ । कुरा जतिनै गरेपनि मुल कुरा युवाहरुलाई स्वरोजगार र उद्यमशिलता संग जोड्नै नै हो । यदी उनिहरुलाई यि बिषयबस्तुहरु संग जोड्न सकियो भने मात्र उनिहरुलाई पलायन हुन बाट रोक्न सकिन्छ । यदी आफ्नै देशमा प्रसस्त मात्रामा अबसरहरु हुने हो भने कसैलाई पनि बिदेशिने रहर हुदैन तसर्थ सम्बन्धित निकायहरुले तत्काल यस तर्फ ध्यान दिन आबश्यक छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, मंसिर ३०, २०७७, ०२:३८:००